Iindaba - i-2019 ye-FIC China yeZongezo zokutya zamanye amazwe kunye neMiboniso yeZithako
Nge-Matshi 18-20, i-2019 FIC China yeZongezo zokutya zamanye amazwe kunye neMiboniso yeZithako ibibanjelwe eShanghai, China. I-Global Ocean yaya kulo mboniso.
Njengomvelisi wehydrocolloids oqeqeshiweyo e-China ongaphezulu kweminyaka engama-20, uLwandlekazi lweHlabathi luxhomekeke kubuchwephesha bokuqhubekeka phambili kunye nokuphuculwa kwetekhnoloji yokuvelisa yonke imveliso enomgangatho ophezulu; iimveliso zethu eziphambili kukutya kwe-agar, i-agar ye-bacteriological, i-agar enyibilikayo yangoku, i-carrageenan, i-agaro-oligosaccharide kunye neemveliso zayo ezihlanganisiweyo, amandla emveliso apheleleyo ngonyaka anokufikelela kwiitoni ezingama-3000. Iimveliso zethu zigunyaziswe yi-ISO, HALAL kunye neKOSHER, nazo ziyakwazi ukuhlangabezana nemigangatho yelizwe laseChina kunye nemigangatho ye-EU, kwaye zithengiswa kakuhle kulo lonke elaseTshayina zithunyelwa kwimimandla esempuma mpuma yeAsia, yaseYurophu naseMelika, njl.
Indawo: Shanghai, China
Ixesha: 18 - 20 Matshi, 2019
Izithako zokutya iChina sisiganeko esinempembelelo kunye nesondeleleneyo kwizongezo zokutya kunye nomzi mveliso wezithako eAsia. Sele kudlule iminyaka engama-26 lo msitho uququzelelwa minyaka le e-China. Iinkampani eziphambili zeshishini zithatha inxaxheba kulo msitho, zitsala amashumi amawaka abatyeleli abaziingcali. Kunyaka ngamnye, inani labathathi-nxaxheba liyenyuka. I-FIC 2019 icwangciselwe ukusukela nge-18 Matshi ukuya kwi-20 ngo-Matshi 2019, kwi-National Exhibition kunye neZiko leNgqungquthela (eShanghai), China. Ngaphandle kweemveliso zamva nje kunye nomboniso weenkonzo, iindwendwe kunye nababonisi banokuthatha inxaxheba kuthotho lwezifundo, iisemina zobuchwephesha, iqonga leengqungquthela kunye neforum yezifundo. Kwezi ziganeko zokuphucula ulwazi, abathathi-nxaxheba banokufumana umfanekiso ocacileyo wendlela yokuphuhliswa kweshishini lokutya, inkqubela phambili, imeko yangoku, ukuveliswa kwezinto, indlela yokusebenzisa ukutya, imigaqo kunye nemigangatho, kunye nophuhliso lwezongezo zokutya.
Bobabini, abathengisi kunye nabathengi abasuka kurhwebo lwasekhaya nakwamanye amazwe bazilungiselela ukufumana amava e-saga yemveliso entsha nethekhinoloji yokusungula iminyhadala, kunye nothotho lweesemina kunye neeforum, ongazange wazifumana ngaphambili.